Maxkamadda ICC Oo Sii Deysay Madaxweynihii | Sanaagmedia — Warar Sugan
Maxkamadda ICC Oo Sii Deysay Madaxweynihii
Maxkamadda Caalamiga ah ee dambiyada ICC ee ku taal magaalada Hague ayaa sii deysay Madaxweynihii hore ee Ivory Coast Laurent Gbagbo, kaasoo horay loogu soo eedeeyay dambiyo ka dhan ah bani’aadanimada.
Maxkamadda ayaa ku weysay wax dambi ah, iyadoo aan caddeymo loo keenin eedeymihii lagu soo oogay.
Waxaa lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay rabshadihii ka dhacay dalka Ivory Coast sanadkii 2010, kaddib doorashadii lagu muransanaa, waxaana rabshadahaas ku dhintaan saddex kun, halka boqolaal kun oo kale ku barakaceen
Mr Gbagbo ayaa la xiray sanadkii 2011, markii ay qbateen Ciidamada Madaxweynaha Alassane Outtara oo taageero ka helayay Ciidamada Faransiiska.
Waxaa uu noqday Madaxweynihii u horeeyay ee la soo taago maxkamadda ICC, waxaana Garsoorayaasha Maxkamadda ICC ay sheegeen in aanu mar dambe ka jawaabi doonin dacwad kale, maadaama xeer ilaalintu aysan soo bandhigin dacwado badan oo ka dhan ah, waxaana amar lagu bixiyay in si degdeg loo sii daayo.
Taageerayaasha Mr Gbabgo ayaa soo dhoweeyay sii deyntiisa, iyagoo Telefishinada ka daawanayay go’aanka Maxkamadda ICC